तपाईंले प्रभु येशू फर्केर आउनुभएको छ, उहाँ सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले मानवजातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिन सक्‍ने सबै सत्यताहरू व्यक्त गर्दैहुनुहुन्छ, र उहाँले परमेश्‍वरको घरबाट नै सुरु गर्दै न्यायको काम गर्दैहुनुहुन्छ भनेर गवाही दिनुहुन्छ। त्यसो भए हामी परमेश्‍वरको आवाज कसरी चिन्न सक्छौं, र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर फर्केर आउनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनी कसरी निश्चित हुन सक्छौं? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
देहधारी परमेश्‍वरका वचनहरूले एउटा नयाँ युग सुरु गर्दछ, सारा मानवजातिलाई डोऱ्याउँछ, रहस्यहरू प्रकट गर्दछ, र मानिसले त्यो नयाँ युगमा लिनुपर्ने दिशा देखाउँदछ। मानिसले प्राप्त गरेको अन्तर्दृष्टि भनेको अभ्यास वा ज्ञानका लागि सरल निर्देशनहरू मात्र हो। यसले सम्पूर्ण मानवजातिलाई नयाँ युगमा डोऱ्याउन वा परमेश्‍वर स्वयमका रहस्यहरू प्रकट गर्न सक्दैन। जब सबै कुरा भनिन्छ र गरिन्छ, परमेश्‍वर परमेश्‍वर हुन्छ, र मानिस मानिस नै हुन्छ। परमेश्‍वरसित परमेश्‍वरको सार छ, र मानिससित मानिसको सार छ। यदि मानिसले परमेश्‍वरले बोल्नुभएका वचनहरूलाई पवित्र आत्माले दिनुभएको सरल अन्तर्दृष्टिको रूपमा हेर्छ भने र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूले बोलेका वचनलाई परमेश्‍वरले व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभएको वचनको रूपमा लिन्छ भने, त्यो मानिसको गल्ती हुनेछ।
परमेश्‍वरलाई चिन्ने कार्य परमेश्‍वरका वचनहरू पढेर र बुझेर हासिल गर्नुपर्छ। कसै-कसैले भन्छन्: “मैले देहधारी परमेश्‍वरलाई देखेको छैनँ, त्यसैले मैले कसरी परमेश्‍वरलाई चिन्ने?” वास्तवमा, परमेश्‍वरका वचनहरू उहाँको स्वभावका अभिव्यक्ति हुन्। परमेश्‍वरका वचनहरूबाट, तैँले मानवजातिप्रतिको उहाँको प्रेम र मुक्ति, साथै तिनीहरूलाई मुक्ति दिने उहाँको तरिका देख्न सक्छस्…। किनकि वचनहरू परमेश्‍वर स्वयम्‌ले व्यक्त गर्नुभएको हो, मानिसद्वारा लेखिएको होइन। परमेश्‍वरले ती व्यक्तिगत रूपमा व्यक्त गर्नुभएको हो; परमेश्‍वर स्वयम्‌ले उहाँका वचनहरू र उहाँको भित्री आवाज व्यक्त गरिरहनुभएको हुन्छ। तिनलाई किन हृदयबाट निस्केका वचनहरू भनिन्छ? किनकि ती गहिराइबाट जारी गरिएका हुन्, र उहाँको स्वभाव, उहाँको इच्छा, उहाँका विचारहरू, मानवजातिप्रतिको उहाँको प्रेम, मानवजातिको निम्ति उहाँको मुक्ति र मानवजातिप्रतिको उहाँका अपेक्षाहरूलाई व्यक्त गर्दछन्…। परमेश्‍वरका वाणीहरूमा कठोर वचनहरू, र कोमल र विचारशील वचनहरू, साथै प्रकटीकरणका केही वचनहरू पनि समावेश छन्, जुन मानिसका इच्छाहरू अनुरूप छैनन्। यदि तैँले प्रकटीकरणका वचनहरूलाई मात्र हेर्छस् भने, तँलाई परमेश्‍वर त कठोर हुनुहुन्छ भन्‍ने लाग्‍न सक्छ। यदि तैँले कोमल वचनहरूलाई मात्र हेर्छस् भने, तँलाई परमेश्‍वर त्यत्ति धेरै अख्तियारपूर्ण हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। यसकारण तैंले ती वचनलाई सन्दर्भबाट बाहिर लैजानु हुँदैन; बरु, तिनलाई सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ। कहिलेकहीँ परमेश्‍वर कोमल र दयालु दृष्टिकोणबाट बोल्नुहुन्छ, अनि मानिसहरूले मानवजातिप्रतिको उहाँको प्रेमलाई देख्छन्; कहिलेकहीँ उहाँ एकदमै कठोर दृष्टिकोणबाट बोल्नुहुन्छ, र मानिसहरूले उहाँको स्वभाव कुनै अपराध नसहने किसिमको छ भन्‍ने देख्दछ। मानिस दुःखद रूपमा फोहोरी छ, र परमेश्‍वरको अनुहार हेर्न वा उहाँको सामु आउन लायकको छैन। अहिले पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको अनुग्रहको कारण मात्र मानिसहरूलाई उहाँको सामुन्ने आउने अनुमति छ। परमेश्‍वरको काम गर्ने तरिकाद्वारा अनि उहाँको कामको महत्त्वमा उहाँको बुद्धिलाई देख्न सकिन्छ। मानिसहरूले परमेश्‍वरसँगको कुनै प्रत्यक्ष सम्पर्कविना नै उहाँका वचनहरूमा यी कुरा देख्न सक्छन्।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूको “देहधारी परमेश्‍वरलाई कसरी चिन्‍ने” बाट उद्धृत गरिएको
जब परमेश्‍वर पृथ्वीमा आफ्नो काम गर्न आउनुहुन्छ, सबै मानिसहरूले अलौकिक घटनाहरू देख्छन्। उनीहरूले आफ्ना आँखाले जे देख्छन् र उनीहरूले आफ्नो कानले जे सुन्छन् ती सबै अलौकिक हुन्, किनकि उहाँको काम र उहाँका वचनहरू बुझ्न नसकिने र प्राप्त गर्न नसकिने कुरा हुन्। यदि स्वर्गको कुनै चीज पृथ्वीमा ल्याइयो भने त्यो अलौकिक नभएर अरू के हुन सक्छ र? जब स्वर्गको राज्यका रहस्यहरू पृथ्वीमा ल्याइन्छन्, रहस्यहरू जुन बुझ्न नसकिने र अज्ञात हुन्छन्, जुन आश्‍चर्यजनक र बुद्धिमान हुन्छन्—के ती सबै अलौकिक होइनन् र? … वर्तमान समयमा देहधारी परमेश्‍वरले गर्नुभएको कामलाई विचार गर्: यसको कुन पक्ष अलौकिक होइन? के उहाँका वचनहरू तेरो निम्ति बुझ्न नसकिने र प्राप्त गर्न नसकिने छन्, र उहाँले गर्नुहुने काम कुनै मानिसले गर्न सक्दैन। उहाँले जे बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई बुझ्‍न मानिसको निम्ति कुनै उपाय छैन, र उहाँको ज्ञानको विषयमा भन्दा, त्यो कहाँबाट आउँछ मानिसले जान्दैन। केही मानिसहरू भन्छन्, “म पनि तपाईंजस्तो नै सामान्य छु, तर तपाईंले जे जान्‍नुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ, यो कसरी हुन सक्छ? म जेठो छु र अनुभवमा धनी छु, तर म जे जान्दिनँ त्यो तपाईंले कसरी जान्‍नुहुन्छ?” जहाँसम्म मानिसको कुरा छ, यी सबै यस्ता कुरा हुन् जुन मानिसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसपछि यस्ता मानिसहरू पनि छन्, जो भन्छन्, “इस्राएलमा गरिएको काम कसैले जान्दैन, र बाइबलका व्याख्याकारहरूले पनि कुनै स्पष्टीकरण दिन सक्दैनन्; तपाईंले कसरी ती जान्न सक्‍नुहुन्छ?” के यी सबै अलौकिक विषयहरू होइनन्? उहाँसँग आश्‍चर्यकर्मको कुनै अनुभव छैन, तापनि उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ; उहाँ बोल्नुहुन्छ र ठूलो सहजतासँग सत्य व्यक्त गर्नुहुन्छ। के यो अलौकिक होइन? उहाँको कामले देहले प्राप्त सक्ने चीजलाई पार गर्दछ। मासुको शरीर भएको कुनै पनि मानिसको विचारमा यो प्राप्त गर्न नसकिने र मानिसको मनको तर्कले बुझ्नै नसक्ने कुरा हो। उहाँले कहिल्यै बाइबल पढ्नुभएको थिएन, तापनि उहाँले इस्राएलमा परमेश्‍वरले गर्नुभएको कामलाई बुझ्नुहुन्छ। उहाँ यस पृथ्वीमा उभिएर बोल्नुहुन्छ, तापनि उहाँले तेस्रो स्वर्गका रहस्यहरूको कुरा बोल्नुहुन्छ। जब मानिसले यी वचनहरू पढ्छन्, यो भावनाले उसलाई जित्न सक्छ: “के यो तेस्रो स्वर्गको भाषा होइन?” के यी सबै मामिलाहरू सामान्य मानिसले हासिल गर्न सक्नेभन्दा बढी छैनन् र?
हामीले के गर्नुपर्छ भनी हामीलाई अर्ती दिन र उहाँको हृदयमा आवाज दिएर परमेश्‍वरले विभिन्न तरिकाहरू र दृष्टिकोणहरू प्रयोग गरेर आफ्ना वाणीहरूलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूले जीवन शक्ति बोक्छन्, हामीले हिँड्नुपर्ने मार्ग हामीलाई देखाउँछन्, र सत्यता के हो भनी बुझ्न हामीलाई सक्षम बनाउँछन्। हामी उहाँका वचनहरूद्वारा खिँचिन थाल्छौं, हामी उहाँका बोलाइको सुर र तरिकामा ध्यान केन्द्रित गर्न सुरु गर्छौं, र यस अतुलनीय व्यक्तिका भित्री भावनाहरूमा अवचेतन रूपमा हामी चासो दिन सुरु गर्छौं। हाम्रा पक्षमा काम गर्न उहाँले आफ्नो जीवनधारी रगत बगाउनुहुन्छ, हाम्रो खातिर निद्रा र भोक गुमाउनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति रुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति सुस्केरा हाल्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति शोक गर्नु, हाम्रो गन्तव्य र मुक्तिका खातिर अपमानित हुनुहुन्छ र हाम्रा संवेदन विहीनता र विद्रोहीपनले उहाँको हृदयबाट आँसु र रगत बगाउँछन्। हुने र लिने यो तरीका कुनै साधारण व्यक्तिको हुँदैन, नत कुनै पनि भ्रष्ट मानवजातिले नै यसलाई प्राप्त गर्न वा हासिल गर्न सक्छ। कुनै पनि साधारण व्यक्तिमा नभएको सहनशीलता र धैर्यता उहाँले देखाउनुहुन्छ, र उहाँको प्रेम कुनै सृजिएको प्राणीलाई दिइने कुरा होइन। उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि हाम्रा विचारहरू जान्दैन, वा हाम्रा प्रकृति र सारलाई स्पष्ट र पूर्ण रूपमा बुझ्दैन, वा मानवजातिको विद्रोह र भ्रष्टता न्याय गर्दैन, वा हामीसँग बोल्दैन र स्वर्गका परमेश्‍वरका पक्षमा यसरी हामीमा काम गर्दैन र बोल्दैन। उहाँले बाहेक अरू कोहीले पनि अख्तियार, बुद्धि, र परमेश्‍वरको गरिमा दिँदैन; परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वरसँग के छ र उहाँ के हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तिनीहरूका पूर्णतामा ल्याइन्छ। उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई बाटो देखाउन र हामीलाई ज्योतिमा ल्याउन सक्दैन। सृष्टि भएदेखि आजसम्म पनि परमेश्‍वरले प्रकट नगर्नुभएको रहस्यलाई उहाँ बाहेक अरू कसैले प्रकट गर्न सक्दैन। उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई शैतानको बन्धनबाट र हाम्रो आफ्नै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्ति दिन सक्दैन। उहाँले परमेश्‍वरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले परमेश्‍वरको भित्री हृदय, परमेश्‍वरका अर्तीहरू, र सबै मानवजातिमाथि परमेश्‍वरका न्यायका वचनहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले नयाँ युग, नयाँ कालखण्ड सुरु गर्नुभएको छ, र नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी र नयाँ काम प्रारम्भ गर्नुभएको छ, र उहाँले अस्पष्टतामा लैजाने जीवनलाई अन्त्य गरी हामीमा आशा ल्याउनुभएको छ, र मुक्तिमा लैजाने मार्ग पूर्ण स्पष्टतामा हेर्न हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई सक्षम बनाउनुभयो। उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई जित्नुभएको छ र हाम्रा हृदयहरूलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस क्षणपछि, हाम्रा मन चेतनशील भए, र हाम्रा आत्मा पुनर्जीवित भए: यी साधारण, नगण्य व्यक्ति, जो हाम्रो बीचमा बस्नुहुन्छ र लामो समयदेखि हामीद्वारा तिरस्कृत हुनुभएको छ—के यो हाम्रा प्रभु येशू नै हुनुहुन्न र, जो जहिले पनि हाम्रा विचारहरूमा हुनुहुन्छ, बिउँझिँदा वा सपनामा हुँदा, र जसलाई हामी रात दिन चाह गर्छौं? यो उहाँ नै हुनुहुन्छ! के यो साँच्चै उहाँ नै हुनुहुन्छ! उहाँ हाम्रा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ! उहाँ सत्य, बाटो, र जीवन हुनुहुन्छ!
अघिल्लो: तपाईंले वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ परमेश्‍वरले व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभएको वाणी हो भनी गवाही दिनुहुन्छ, तैपनि कतिपय मानिसहरूले यी वचनहरू पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि पाउने कुनै व्यक्तिले बोलेका वचनहरू हुन् भनी विश्‍वास गर्छन्। देहधारी परमेश्‍वरले बोल्नुभएका वचनहरू र पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि पाएको कुनै व्यक्तिद्वारा बोलिएका वचनहरूको बीचमा के भिन्नता हुन्छ?
अर्को: प्रभु येशूले भन्नुभयो, “मेरो भेडाले मेरो सोर सुन्छ” (यूहन्‍ना १०:२७)। जब प्रभु फर्केर आउनुहुन्छ, उहाँले आफ्ना वाणीहरू बोल्नुहुनेछ र आफ्‍ना भेडाको खोजीमा जानुहुनेछ। प्रभुको पुनरागमनको प्रतीक्षा गर्नका लागि परमेश्‍वरको आवाजको खोजी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर हामी परमेश्‍वरको आवाज र मानिसको आवाज बीचको भेद छुट्ट्याउन असमर्थ छौं। कृपया यस विषयमा हामीसँग सङ्गति गर्नुहोस्।